Selim oo ka yimid Les Larmes du Paradis ayaa taageerayaasha si lama filaan ah u qaaday: eray ahaan, wo - teles relay
Selim oo ka socda Les Larmes du Paradis ayaa taageerayaasha si lama filaan ah u qaaday: eray ahaan, wow
By TELES RELAY On Juun 22, 2020
Jilaaga Turkiga Berk Atan ayaa hada u ciyaaraya sidii Selim oo taxane ah Cennet (Ilmada Jannada) .
Nooclas: FARSAMADA KHUDBADII PPADODE 90 FARMAAJO WAA FARXAN…
Novelas: CARUURTA SIYAASADDA KHUDBADDA EE ARRIMAHA KHATARTA 87 Arzu ayaa sidaas yidhi ...
Novelas: CADAALADAHA PARADISE waa 83 ee faransiiska Arzu wuxuu aadaa xabsi…
28-jirkan kalgacalka leh, oo ku faanaa cinwaanka 'Model Modric' ee ugu quruxda badan Turkiga sanadkii 2012, ayaan aad ugu firfircoonayn shabakadaha bulshada.
Tani waa sababta ay taageerayaasheeda dumarku markasta u helaan fasax marka ay mararka qaarkood la wadaagayaan cliché cusub. Dhowaan, wuxuu ku faaney sawir laga soo qaaday sawir la qaaday sawir uu ka qaaday sawir qaadayaasha xiddigaha Turkiga Cem Tatla.
Jilaa dhalinyaro ah oo leh muuqaal soo jiidasho leh ayaa yaqaan sida loogu farxiyo qalbiga haweeneyda mana aha inuu muujiyo oo keliya shukulaashihiisa calooshiisa .
Xigasho: Instagram / berkatan
La'aan la'aanta diyaarado iyo lacag, Camair-Co ayaa 371 shaqaale ah ka dhigaysa shaqo la’aan farsamo muddo 3 bilood ah
Fillon: muxuu statementsliane Houlette u caddeeyay kiiska kiiska? - VIDEO
Noolallas: barayaasha PARADISE EPISODE 90 FARMAAJO WAA KU SAABSAN FARSAMADII GUUD EE…
Novelas: EL DIABLO SUMMARY EPISODE 48 oo Faransiis ah - Fiidiyow
Novelas: FATMAGÜL SUMMARY EPISODE 48 Vural Ayaa Si Weyn U Sii Dhaawacmay Madaxa -…